श्रीमानलाई घरमै काम गर्ने श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै १० करोड रुपैयाँ दिइन, काम थाहा पाउँदा सबै चकित ! – Life Nepali
श्रीमानलाई घरमै काम गर्ने श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै १० करोड रुपैयाँ दिइन, काम थाहा पाउँदा सबै चकित !
काठमाडौं । अली र महनूर अल्वी, नेपालको प्रदेश ३ निवासी हुन् । उनीहरु २००४ देखि एक अर्का अनुबन्धित थिए । त्यही साल उनीहरुबीच विवाह भयो । अली शहरमा ईन्जिनियरको रूपमा काम गर्थे र महनूर स्थानीय क्लिनिकमा रिसेप्शनिस्टको रूपमा काम गर्थिन् । उनको पहिलो बच्चा पछि, मोiहम्मद २००८ मा जन्मेका थिए, महनूरले आफ्ना बच्चाहरु संग घरमै बस्नको लागि निर्णय गरेका थिए । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous “पा’गल केटि” २ मिनेट समय दियर अ’वस्य पढ्नुहोला ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
Next १९ ब’र्षिय यु’वतिले बनाइन् ब’ला’त्का’र हु’नबाट ब’चाउने यस्तो पे’न्टी ! दु’निया भयो च’कित !